fadlan boggan waxaad ka helaysaa gabayo aad u muhim ah gaara ahaan hadii aad tahay arday dhigta sugsiga sare.
halkan waxaa ka helaysaa gabayada intaanu soo ururinay iyo inta soo socotaba. waa kuwan gabayadii ee gudoon wacan.
Faarax Nuur, "Arab"
Faarax Nuur wuxuu dhashay wakhti lagu qiyaaso 1860s; waxaanu dhintay horaantii 1930s. Farah Nuur wuxuu kamid yahay gabyaaga waaweyn ee Somalida. Inkastoo Farah leeyahay qaar kamid ah gabayada u xasiisisan dhinaca qabiilka iyo dagaalada sokeeye, haddana waxaa uu leeyahay kuwo uu sulux iyo nabadgelyada kaga hadlaayo.
Gabaygan waxa uu ku tilmaamayaa abwaanku xadka uu dulqaadku lee yahay ee bani aadamka loo samri karo.
1. Rag sabaan ka sabaan baan,
2. Samaantuun badiyaa.
3. Haduu saakimi waayo,
4. Sariiraan u dhigaa,
5. Iska seexo idhaa.
6. Haduu saakimi waayo na,
7. Caanihii hasha Suub baan,
8. Saddex goor u lisaa,
9. Ku sarriigo idhaa.
10.Haduu saakimi waayo,
11. Sumalkii rugta joogay iyo,
12. Sogobkaan u qalaa,
13. Haduu saakimi waayo,
14. Siirigii Cadmeed baan,
15. Subaggawga badshaa,
16. Haduu saakimi waayo,
17. Gabadh suurad wanaagsan baan,
18. Surrada ugu dhisaa.
19. Haduu saakimi waayo,
20. Xoolo gooni u soofiyo,
21. Sadadaan ku ladhaa,
22. Haduu saakimi waayo,
23. Seeddow, mood iyo mood iyo,
24. Salaantaan badiyaa.
25. Haduu saakimi waayo
26. Salaadaan lallabaa yoo
27. Meydal seedo madow iyo
28. Salligaan cuskadaa yoo
29. Sulub eebo ku joogtaan
30. Sarartaa ku dhuftaa
31. Sambabkaan ka baxshaa
32. Markaasuu sellimaa
Gabaygan wuxu Abwaanku tiriyey waagii Gaaladii Yurub ka soo gooshtay ay geyiga Soomalida qaybsanaysay. Wuxu Abwaankii Waddaniga ahaa ee Faarax Nuur (Ilaah ha u naxariistee) ku guubaabinayaa Ummadda Soomaaliyeed in aan la aaminin Gaalka sidii uu Eebbe Inna faray. Wuxu abwaanku ku bilaabayaa in astaamihii Aakhiru-Samaanku ay ifafaalahoodii muuqdaan;
Maxamed Nuur Laangadhe.
Gabaygan 1943kii ayuu tirshey abwaanku.
Maadaama uu abwaan ahaa waxa ingiriiskii weydiistey inuu ka hadlo guulihii ingiriis iyo xulafadiisu ku hanteen dagaalkii labaad
Iglan baa gubanaysa
oon go'aygiina ka qaatay
25. sidii malagga ruuxayga dhigay laygu kaa dherere
26. inkastay dhallaan yeelatiyo ubad dhawaaqaaya
27. dhimashada ha joogtee si kale waw dhur sugayaa
28. dhufsataye qalbiga maanigaa dhudi ka reebaaya
Xuseen Xasan (Ciidagale)
Xuseen Xasan wuxuu ahaa nin ku caanbaxay sifo kasta oo inan rag lagu majeerto. Wuxuu ahaa gabyaa, abbaanduule, geesi dagaal yahana, deeqsi, garyaqaaan iyo kuwo kaloo aan la soo koobi karin. Xuseen oo ahaa tiir ka mida Tiirarka suugaanta wuxu ahaa ninkii ugu horreeyey ee Erayga Suugaan u adeegsada gabay. Erayga suugaan kuma cusbayn afka Somaliga oo wuxuu lahaa dhawr macno oo kan ugu xoogga badani ahaa meesha biyuhu u shubmaan ee marka dhulka kale wada qallalo weli rayska leh ee ugbaadka laga daaqo oo waa tan jiilaalka la odhan jirey "Geelii reer hebel meel heblaayo ayuu suugaan ka daaqayaa". Eraygaas ayuu Xuseen ku soo koobay murtida Soomalida isagaana loo nisbeeyaa oo waakii gabay aanan hayn ku lahaa
Suugaanta maansada haddaan siinka ka hingaadsho
Beribaa Xuseen Xasan iyo niman kalaa is qabtay markaasaa Xuseen oon joogin uu Suldaankii gartii siiyey ninkii kale. Ninikii kale ayaa laga sheegaa isagoo malaha gabay Xuseen hore uga u tirshey ka jawaabaya inuu yidhi
Xuseenoow aduunbaa gabyee guuli kuma raacin.
Xuseen waxa laga sheegaa inuu yidhi "Suldaanoo maadaa sidaa yeelay" oo uu "Haa" kaga jawaabay. Xuseen halkii wax looga dugayey ayuu Suldaankii Suldaammada ee Ciidagale ayuu ku yidhi "Suldaanow inantaada was" oo waakii gabay ku lahaa
Waayan Suldaankii ku idhi hal an la eegayne
Gabaygan inta yari naga soo gaadhay waxa uu Abwaanku ka tirshey jail-ka Berbera oo uu ku xidhnaa isagoo fidmowalannimo malaha lagu soo eedeeyey. Xuseen sidaan hore u soo sheegnay lahaa sifo kasta oo nin ragi lee yahay waxa uu bayaaminayaa tilmaamahaas qaar ka mid ah oo uu lee yahay "toloow haddii aan meesha ka baxo oo xabsi la igu illaawo yaa i beddeli". Gabaygan ka dib ayaa Xuseen lo gurmaday oo xabsigii Suldaanku dhigay laga soo saaray.
MA DHAMMA GABAYGU
Xuseen xasan waxa isagoo 80 jir ah Ugaadeen aano ugu dilay geyiga CIID. Xuseen inta la qabtay isagoo oday ah ayaa loo geeyey ninkii beesha xukumayey. Waxa rag badanoo wax garad ahi isku raaceen in ay dhaqanka Somalida ku ceeb tahay in la dilo nin 80 jir ah maadaama uu tabar gabay oo aanu Daarood gacantiisa dib ugu ciili dooni. Wadaad ka mida beesha ayaa laga soo weriyey inuu sheegay in maadaama Xuseen hadli karayo uu afkiisu hub ka daran yahay halkaasaana lagu dilay Xuseen Xasan oo dabadii rag badan daraaddiis aakhiro loo dawiyey.
Xuseen lama soo koobi karo inta uu col geliyey Ugaadeen ee beelo dhan uu oodaha u rogey oo waa kii gabay uu tirshey ay ku jirtey;
Weli caday Bah Cawlooy ma jebin cududahaagiiye
Intaan Caliyo Haaruun ka diley ciiddan way tahaye
halkan waa qaybtii labaad ee gabayada ahayd. fadlan in asxaabtaada ah gaadhsii website-kan maadaaba aad ka faa iidaysanayso aqoon dheeraad ah .
Maxamed Xaashi Dhamac "Gaariye"
Waa maansaddii ugu horeysay Deelleyda, uuna tiriyey abwaanka weyn ee Maxamed X Dhamac "Gaariye"
Max'ed Ibraahim warsame "Hadraawi"
Boqorkay huq iyo ciil
Hadimada kalgacalka leh
Cilmigii u hoydow
Heesaha baroorta ah
Hibo iga guddoomoo
Kolley waan hubaayoo
Hal yar aan ku toydee
Jannadii ma hurudaa?
Hadh qabow ma jiiftaa?
Hoobaan ma gurataa?
Sow kuuma heesaan?
Waxa aad la haysaba
Hoo kuma yidhaahdeen?
Wedka lama huraayee
Reer soo hayaamiyo
Hayin raran ma kulanteen?
Hor Illaahay adigiyo
Hodan maysku aragteen?
Ma is dhaafsateen hadal?
Bal maxaan haweenkiyo
Dumar ugu hilloobaa?
Ama kula heshiiyaa
Ugu hagar la'aadaa?
Sowtay hir beeniyo
Ku tuseen hillaacee
Hogol aan da'ayn iyo
Hanfi kuu aroorsheen
Hirwo kuu garaaceen
Hungo kuugu baaqeen!
Sowtay ku hawleen
Ku jareen halbowlaha
Haadaan ku koriyeen
Hore kuugu riixeen
Hogga kuu dabooleen
Hoos kuugu tuureen!
Sowtay ku heereen
Hengelaa ku saareen
Gudcur kuu hillaabeen
Ku dhigeen habaaskee
Cidla kaaga hoyden
Haadda iyo xuunshadu
Waxaan ugu hamranayaa
Hooyaa ka dhalatoo
Naaskii habreed baa
Wallee hawlahaan galo
Iyo heegantaan dhigo
Dumar lama haweysteen
Ragba ma hungureeyeen
Hanti lagama dhiibeen
Guri laguma hoysteen
Hadal lalama yeesheen!